Tatitra momba ny fanarahana data 2012 | Martech Zone
Tatitra momba ny fanarahana data 2012
Sabotsy, Martsa 2, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Rahoviana no vonona hizara ny angon-drakitra ny mpanjifa? Ohatrinona ny angona? Raha tsy tsapanao izany dia matetika i Eropa no mitarika ny olana momba ny angona sy ny tsiambaratelo. Hentitra kokoa ny lalàn'izy ireo ary mitsikera kokoa izy ireo amin'ny fomba fisamborana data. Amerika Avaratra dia somary mitaredretra kely ary manana toe-tsaina laissez-faire betsaka kokoa isika - matetika manangona be loatra ary tsy dia mahavita firy amin'izany.
Ny fahavononan'ny mpanjifa hizara vaovao amin'ireo marika dia nanjavona tao anatin'ny 18 volana lasa. Ny fikarohana farany dia mampiseho fiakarana hatramin'ny taona lasa izay milaza vaovao tsara ho an'ireo mpivarotra izay toa mahazo ny fahatokisan'ny mpanjifa tsikelikely. Avy amin'ny Tatitry ny fanarahana data an'ny DMA ho an'ny 2012
Mampahery ity tatitra sy sary ity satria manome porofo fa mihombo ny fahavononan'ireo mpanjifa hizara ny angon-drakitra ananany. Mampiseho ny tatitra fa, raha ampiasaina fanao tsara indrindra ary omena ny mpanjifa ny marketing tadiaviny - mora kokoa ny fifanakalozana data.
Tags: Datafanarahana datadmadma uk
Fandehanana miasa amin'ny automatisation marketing
Ahoana ny fomba fanoratana atiny izay hamaritan'ny mpitsidika ny lanjanao